Shiinaha Shirkadaha Shirkadaha iyo alaab-qeybiyeyaasha | KAIQUAN
Baaxadda mugga hawada: 3000-72000m3 / saac
Baaxadda cadaadiska: 160hPa-1013hPa
1. Saamayn weyn oo keydinta tamarta ah
Naqshadeynta qaab-dhismeedka hidda-hidda ayaa si weyn u hagaajineysa waxtarka hawlgalka ee bamka ku yaal gobolka 160-1013hPa, sidaas darteed waa ka waxtar badan iyo tamar-badbaadin.
2. Hawlgal jilicsan iyo kalsooni sare
Naqshadeynta naqshadeynta haydarooliga, mishiinka kiciya wuxuu qaataa saamiga ballac-ballac ballaadhan, sidaa darteed mashiinku wuxuu leeyahay wax-qabad ka sarreeya kan kale ee bambooyin taxane ah marka la helayo mugga bambooyin isku mid ah. Isla mar ahaantaana, qaabeynta qaab-dhismeedka fudud waxay ka dhigaysaa hawlgalka bamka mid deggan oo lagu kalsoonaan karo, dhawaquna wuu hooseeyaa.
3. Faa'iidooyinka dhismaha ee aadka u sarreeya
Qaab-dhismeed jiif ah oo hal-fulin ah, fudud oo la isku halleyn karo, fududahay in la ilaaliyo. Qaabdhismeedka bamka mashiinka leh baffle wuxuu ka dhigi karaa hal bambo inuu buuxiyo shuruudaha laba xaaladood oo shaqo.
4. La qabsi adag
Si loo buuxiyo shuruudaha kala duwan ee ka hortagga-daxalka, qaybaha socodka waxaa laga samayn karaa alaab bir bir ah oo u dhiganta. Qaybaha socodka waxaa lagu buufiyaa polymer anti-corrosion daahan si loo buuxiyo shuruudaha daxalka adag. Khatimidii usheeda dhexe waxay leedahay ikhtiyaarro xirxira iyo farsamooyin farsamo si loo buuxiyo shuruudaha xaaladaha shaqo ee kala duwan
Hore: 2BEX Vacuum saar
Xiga: HD Taxanaha Gawaarida Wareegga Diagonal